Ukwamukela ongakwazi ukukulawula lapho uhweba i-FX kubalulekile entuthukweni yakho | I-FXCC Blog
Aug 12 • Ukuthengiswa Kwama-Forex Izihloko, Amazwana eMakethe • Ukubuka kwe-1216 • Amazwana Off Ukwemukela ongakwazi ukukuqondisa lapho ukuhweba i-FX kubalulekile intuthuko yakho
Ungasebenzisa ukuzilawula nokuzithiba lapho uhweba, imiqondo emibili ezoba nomthelela omkhulu kwinqubekela phambili oyenzayo njengomhwebi we-forex. Kusetshenziswa izilawuli ezahlukahlukene okufanele uhwebe kuzocacisa impumelelo yakho. Kungaba yinkohliso ukukholelwa ukuthi ungalawula ukusebenza kwemakethe, ngokufanayo kungaba yiphupho ukucabanga ukuthi ungahlala ubikezela ukuqondiswa kwemakethe kahle. Lapho usuwamukele la maqiniso angenakuphikiswa ungaqala ukwenza isu lokuphumelela lesikhathi eside.
Umhwebi we-forex angalawula lapho bengena ukuhweba nalapho bephuma. Bangakwazi futhi ukukhetha ukuhlala ngaphandle kwezimakethe abazikhethile kuze kube lapho izimo zilungile, ukuze kube nesizathu sokungena emakethe.
Yini izimakethe ukuhweba
Umhwebi angakhetha ukuthi yiziphi izimakethe okufanele ahwebe ngazo nokuthi zingaki izibambiso okufanele azithengise. Ingabe unquma ukuhweba i-FX kuphela, noma udayisa ama-indices we-equity kanye nezimpahla nakho? Ingabe uhweba kuphela ngababili abakhulu beFX? Izinqumo kanye namandla owasebenzisayo kulokhu kuhlanganiswa kuzoba yimiphumela yakho. Kufanele ugweme ukuhweba ngokweqile nokuphindisela. Ukuzama ukuphatha imisebenzi eminingi kakhulu ezimakethe eziningi kakhulu kungaba yingozi, njengokuzama ukubuyisa ukulahleka kwakho ngokuziphindisela. Izimakethe ze-forex azinendaba ukuthi uma unqoba noma ulahlekelwa, ukwenza inqubo kube ngokwakho kungalimaza kakhulu.
Ungakhetha ukunciphisa ubungozi bakho ngokusebenzisa izitobha. Ukulawulwa okunikezwayo kungenye yamathuluzi abaluleke kakhulu onawo. Ukufaka engcupheni iphesenti elincane le-akhawunti yakho ekuhwebeni ngakunye kungakuqinisekisa ukuthi awuvimbi ngesikhathi sakho semfundo ephakeme, esanda kufakwa, imfundo yokuhweba.
Unganquma ukusebenzisa izibalo ezihlukene zosayizi ozozibona online ukuze uthole ukuthi yiluphi usayizi ongalusebenzisa ngokusekelwe kumaphesenti we-akhawunti yakho ofuna ukufaka engcupheni ekuhwebeni ngakunye. Leli thuluzi lamahhala, elikhutshelwa iningi labathengisi abathembekile, linikeza indlela ekhethekile yokulawula.
Izinkomba okhetha ukuzisebenzisa
Ungalawula futhi ukhethe ukuthi yiziphi izinkomba zobuchwepheshe ozozisebenzisa futhi ezingaki. Lokhu kukodwa okwenziwe indlela yakho namasu okuhweba kunikeza amandla okwakha icebo nokulawula ukuthi uxhumana kanjani nemakethe ngendlela enziwe kakhulu, ukukunikeza izinga elikhulu lokulawula.
Ungalawula imizwa yakho
Ukukulawula imizwelo nokuqinisekisa ukuthi unamathela ohlelweni lwakho lokuhweba kungenye yezinto ezibaluleke kakhulu ukuqinisekisa ukuthi uzinikeza wonke amathuba empumelelo. Kufanele wethule izinto ezishintshayo kuzici eziningi zokuhweba kwakho. Izinhlobo eziyisisekelo ezishintshayo ezinjengezitobhini, imikhawulo kanye nokufaka okuzenzakalelayo kuzokunikeza izinto zokulawula.
Ungakulawula ukulahleka kwakho ngosuku bese usebenzisa isephula-sekethe
Kufanele uzibekele ukulahleka kwansuku zonke futhi uma ufinyelela ekulahlekelweni kufanele uyeke ukuthengisa ngokushesha. Uma ulahlekelwa ngokweqiniso i-0.5% ochungechungeni lwezohwebo ezine, umkhawulo wakho wokulahleka kwansuku zonke owenzelwe wena yi-2% futhi uyawufinyelela, lapho-ke uyazi ukuthi usazokwazi ukuhweba ngosuku olulandelayo. Ngokufanayo, uma mhlawumbe unezinsuku ezintathu zokulahlekelwa ngokulandelana ke ukulahleka okuphelele kwe-6% kuzolimala, kodwa ngeke kulimaze amathuba akho okuba ngumthengisi ophumelelayo. Unezinketho ezimbili uma ukusondela kwe-6%; ungavele uqhubeke necebo lakho lamanje ngemuva kokuthatha isinqumo sokuthi imakethe ayivumelani okwesikhashana nendlela yakho. Ngenye indlela ungasebenzisa ukulahleka kwe-hypothetical 6% ukuguqula kakhulu indlela necebo lakho.
Ungalawula ukuhweba kwakho ngokuyeka ukuhweba
Awukwazi ukulahlekelwa uma ungathengisi. Ukulawulwa okukhulu kakhulu onakho ukusebenzisa ukuzithiba futhi uthathe isinqumo sokungathengisi. Unganquma ukungathathi i-commerce ngoba ayihambelani nohlelo lwakho. Ungaphuma eseshini yokuhweba ngoba umcimbi wekhalenda ungahle ubangele ukwehla okuhlukile. Ungathatha futhi iholide emakethe ngemuva kokulahlekelwa okungakaze kwenzeke, ubuyela emuva ekuphimiseleni, uphelelise indlela necebo lakho bese ubuyela emkhakheni oqabulekile futhi waphinda wabekelwa indawo kabusha.
« Izinto ezibalulekile ongazibeka kucebo lakho lokuhweba Ungayisebenzisa kanjani isu lezinhlaka eziningi lapho uhweba i-FX »